Utolika wasenkantolo ebhokisini likammangalelwa | Scrolla Izindaba
Utolika wasenkantolo ebhokisini likammangalelwa
Utolika wasenkantolo uJoseph Moroka akamusha ezinkantolo, kodwa ngoLwesibili uzithole ebhokisini likammangalelwa enkantolo.
Lokhu kungemuva kokuba eboshwe oKlebe ngemuva kwezinsolo zokuthi wenza inkohlakalo nokweba.
Okhulumela uphiko loKlebe uNomthandazo Mnisi utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi ubugebengu bakhe baqala kudala cishe ngaphezu kweminyaka emithathu.
“UJoseph Moroka uvele kafushane eNkantolo yeMantshi yase-Hartswater namhlanje ngezinsolo zenkohlakalo nokweba,” kusho uMnisi.
“Umsolwa uboshwe ekuseni lapho asebenza khona yithimba loPhenyo loKlebe eliphenya kakhulu ngenkohlakalo ngemuva kophenyo.”
Kusolwa ukuthi phakathi kukaNhlangulana kowe-2016 noMfumfu kowe-2017, uMoroka ongutolika we-Setswana enkantolo, waxhumana nodadewabo kamsolwa ecaleni elalisolwa ngokweba imfuyo wafuna imali eyizi-R2 500 ukuze akhululwe. Kwesinye isigameko esingafani kodwa esihlobene naso, uMoroka waya kunina kamsolwa ecaleni elihlobene nezidakamizwa wafuna izi-R1,000 ukuze akhulule umsolwa.
Umsolwa unikezwe ibheyili yezi-R3,000 kanti icala lihlehliselwe umhla zi-16 kuNdasa.